Sidee ku timid raali-gelintii uu Xasan Cali Kheyre xalay siiyey CC Shakuur | Warkii.com
Home warkii Sidee ku timid raali-gelintii uu Xasan Cali Kheyre xalay siiyey CC Shakuur
Sidee ku timid raali-gelintii uu Xasan Cali Kheyre xalay siiyey CC Shakuur
Xog ay heshay Warkii.com ayaa sheegeysa in raali-gelinta uu Kheyre bixiyey ay ku timid cadaadis xooggan oo uga yimid Madasha Xisbiyada Qaran, gaar ahaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyo sidoo kale siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Sida ay xogta ku heshay Warkii.com, xubnaha ka wakiilka ahaa Kheyre ayaa kadib u tegay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, kaasi oo aqbalay codsigooda islamarkaana u sheegay inuu Xasan Sheekh xallin doono, balse ay u baahan yihiin inay soo xaliyaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Sheekh Shariif ayaa kadib la hadlay Xasan Sheekh, una sheegay in Kheyre uu kaga dhigay, taasi oo Xasan uu aqbalay.
Previous articleCiidamada Itoobiya oo magaalooyin hor leh kala wareegay TPLF
Next articleCC Shakuur oo ka hadlay raali-gelintii uu siiyey Xasan Kheyre, dalab cusub-na diray
Xukuumadda Jabuuti ayaa war cusub ka soo saartay colaadda iyo dagaallada ka socda gobolka Tigray ee waqooyiga gobolkaasi. Qoraalka ka soo baxay dowladda Jabuuti ayaa...
Maxaa kasoo kordhay dagaalada ka socda dalka Itoobiya?
Wararkii u dambeeyey ee doorashada guddoonka baarlamaanka HirShabelle
Golaha shacabka oo maanta ansixiyey guddi cusub oo uu muran ka...